Baccarat Ukubheja System - UK 2021 ✅
Phila Amakhasino 2021
Ibhonasi ebuyisa imali
Idlalwa kanjani i-Baccarat
Baccarat Ukubheja System
Idlalwa kanjani i-Blackjack
Ukubalwa Kwekhadi le-Blackjack
Izinkinga zecebo leMartingale
Idlalwa kanjani iTexas Holdem
I-Texas Holdem Yabaqalayo
I-Texas Holdem Hands
Isu laseTexas Holdem
Izimo zeTexas Holdem
Ezintathu Card Poker
Amakhasino Wokukhokha Okusheshayo
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Baccarat » Baccarat Ukubheja System
Ukunqoba emdlalweni we-baccarat ne-blackjack kuthonywa yizici eziningi, futhi into enjalo echaza ukuthi wonke umdlali kufanele azi ukuthi kunqenqemeni lwendlu. Ekugembuleni kwekhasino, umkhawulo wendlu igama elisetshenziselwa ukuchaza inzuzo yezibalo yekhasino ngaphezu kwabadlali njengoba bedlala ngokuhamba kwesikhathi. Unqenqema lwendlu oluphakeme lusho ukuthi abadlali basenkingeni.
Lapho udlala umdlalo wekhasino onjenge-baccarat ne-blackjack, kungcono ukuqonda umkhawulo wendlu ngoba awukwazi ukuwina ekugembuleni ‘. Futhi ku-baccarat naku-blackjack, ingqikithi eyinhloko okufanele uyiqonde ukuthi umphetho wendlu uyashintsha lapho kudlalwa amakhadi njalo. Yebo, kunomphetho wendlu ekhangisiwe kepha lokhu kubhekisa ekwakhiweni kokuqala kwesicathulo se-baccarat, kepha le ndlu ekhompiyutha yendlu ingashintsha kulo mdlalo.
Uma udlala i-blackjack, unqenqema lwendlu lutshekela kumdlali cishe ku-30% wezandla, okwenza ukubalwa kwekhadi kube isu elinconywayo okufanele ulisebenzise. Kepha le ndlela kungenzeka ingasebenzi kahle nge-baccarat. Ngenkathi kunezinkinga ezithile lapho kusetshenziswa ukubalwa kwamakhadi ku-baccarat, akusho ukuthi ngeke kusebenze.
Kwabathandi bemidlalo yetafula abaningi, indlela ejwayelekile ukubuka amabhodi wamaphuzu bese ulandelela imiphumela yomlando. Lokhu kuvame ukusetshenziswa njengesisekelo sokubheja okuzayo etafuleni. Emidlalweni ye-baccarat, le miphumela yomlando ivame ukungabi nalusizo ngoba awekho amaphethini, futhi imiphumela edlule ngeke ikunikeze imiphumela elandelayo. Idatha yomlando ingaba yize kodwa akusho ukuthi alikho isu elisebenzayo elingasetshenziswa. Emdlalweni we-baccarat, izingqinamba ezinhle kakhulu zizohlala zikwiBanker, Player noma iTie. Futhi ukwazi ukuthi ikuphi okungahambelani kahle nomdlalo nokwenza ukubheja kulowo mphumela kubhekwa njengecebo elihle kakhulu noma elihle kakhulu lokubheja.
Ngabe Kuyenzeka Ngempela Ukwazi ukuthi Imuphi Umphumela Onezilinganiso Ezingcono Kakhulu Zomjikelezo ngamunye?
Kulula ukulahla isu elilungile lokubheja lapho umdlali azokwazi khona ngaphambili ukuthi iyiphi i-wager enezandla ezinhle kakhulu. Kepha ngenxa yokuqanjwa okusha nentuthuko kwezobuchwepheshe, amadivayisi amasha nezinhlelo zokusebenza seziyatholakala ezingasetshenziswa ngabadlali ukukhomba ukuthi ngubani phakathi koMdlali, Obhange noma uTie onamathuba amahle kakhulu emzuliswaneni olandelayo. Ithuluzi elilodwa ongalisebenzisa uhlelo lokusebenza olungalandwa ku-Google Play Isitolo esivumela umdlali ukuthi ancintisane nomphetho wendlu. Ukuze usebenzise lolu hlelo lokusebenza, abadlali kufanele bafake amakhadi njengoba lokhu kusingathwa etafuleni.
Ngaphambi kokuqala komjikelezo, umdlali kufanele acindezele u-‘Compute ‘bese uhlelo lokusebenza luzobala masinyane ukubuyiselwa ngqo kokubheja. Uma unentshisekelo yokuhlola ukuthi uhlelo lokusebenza lusebenza kanjani, mane ubheke “ukubalwa kwekhadi le-baccarat” kubha yokusesha ye-Google Play Isitolo. Endaweni yokudlala lapho ukusetshenziswa kwefoni kuvunyelwe, ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza kungakhuphula ithuba lokuwina. Ngamafuphi, ngokusebenzisa ubuchwepheshe bamuva obutholakala ku-inthanethi, abadlali bangathola ikhawunta emaphethelweni endlu futhi bakhe nethuba.
Ukuhlola lolu hlelo lokubheja, kuye kwenziwa ukulingisa okulula okubandakanya izicathulo ezingama-200,000-deck eziyisishiyagalombili, enemininingwane elandelayo:
Ikhadi elisikiwe linamakhadi ayi-14, anemithetho yekhadi yokusha neyokusika
I-‘Tie ‘inikeza u-9 kuye ku-1
Umuntu uzobheja ngomngcele ophansi kakhulu wendlu
Ukubheja kusethwe kunombolo ethile yamayunithi
Ngalesi sekulingisa okulula, kuholele enanini lendlu elingu-0.878%, lapho ukubheja ku-Banker kube ukubheja okungcono ukwedlula konke ku-75.51% wezandla nge-Tie njengokubi kakhulu kwezintathu, okungcono kakhulu ku-3.72% we kudlalwa izandla. Futhi ngokususelwa kulokhu kulingisa, umdlali uzolahlekelwa kanye njalo ezandleni ezi-2.15. Ukuthuthuka kwenzuzo yendlu iye ku-0.78% akwanele ukushaya ikhasino. Ukwenza ngcono ukuma, isidlali singafaka uhlelo lokugudluza lwe-chip. Lokho umdlali angakwenza ukuthembela ‘ekusakazeni ukubheja’ okusho ukuthi umdlali angabheja kakhulu lapho umkhawulo wendlu umncane. Ukuhlola, ukulingisa okulula okubandakanya izicathulo eziyi-150,000 kwembula imininingwane elandelayo ebucayi:
Umdlali uzobheja iyunithi elilodwa umkhawulo wendlu okhonjisiwe okungenani u-90%, futhi ubeka amayunithi ayi-10 uma umphetho wendlu ungaphansi kwalowo
Isidlali asisebenzisi uhlelo lwe-chip lokugoqa
Usebenzisa le sampula yokulingisa, imiphumela ikhonjisiwe ngezansi:
Umdlali ubeka ukubheja okuphakathi kwamayunithi we-2.70 esandleni ngasinye
Inzuzo yendlu isethwe ku-0.38%
Ngalesi sekulingisa kwesibili, umkhawulo wendlu manje ususethwe ku-0.38% manje osezingeni eliphansi futhi ongabhekelwa kalula ngokusetshenziswa kwesaphulelo se-chip esigoqekayo. Futhi uma umdlali ethola isaphulelo se-chip esingu-1%, manje inzuzo isisikhonkwane ngo-0.11%. Uma umdlali ethatha isinqumo ngeyunithi yokubheja engu- $ 10,000, uzodinga ukubheja u- $ 10,000 x 2.70 x 100 = $ 2,700,000 kuzo zonke izandla eziyi-100. Usebenzisa umkhawulo we-0.11% wendlu, ngokwethiyori, umdlali angathola inzuzo eyiyo engu- $ 2,097 yezandla eziyi-100.
Ngamafuphi, umdlali angathuthukisa amathuba akhe okuwina kumdlalo we-baccarat uma eqondiswa uhlelo lokusebenza njengaleli okuxoxwe ngalo lapha. Imiphumela nedatha engenziwa wuhlelo lokusebenza kungasiza ekuhleleni izinqumo zakho lapho wenza ukubheja kwakho etafuleni le-baccarat.
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuwina kumdlalo we-baccarat ukuza necebo elilungile lokubheja
Isu elilungile lokubheja lingenziwa uma umdlali eqonda izingqinamba zamanje zemiphumela emithathu engaba khona- Umdlali, uTie noBanker
Enye indlela yokwazi izingqinamba ukusebenzisa uhlelo lokusebenza olungalandwa ku-Google Play Isitolo
Imiphumela eyenziwe uhlelo lokusebenza ingasetshenziselwa ukwenza isinqumo sokubheja unolwazi lapho udlala i-baccarat